people Nepal » प्रेस रिभ्यू : लिम्पियाधुरासहितका नक्सा छाप्न सरकारलाई कस्को डर ? ‘जनसत्ता’का लिखतलाई वैधानिकता प्रेस रिभ्यू : लिम्पियाधुरासहितका नक्सा छाप्न सरकारलाई कस्को डर ? ‘जनसत्ता’का लिखतलाई वैधानिकता – people Nepal
तत्कालिन जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागिपरेका केही स्थानीय तहले उक्त लिखत मान्न दबाबसमेत दिएका थिए । …रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले तत्कालिन जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिलाउने शिविर नै सञ्चालन गरेको थियो । गत पुस २७ र २८ गते गाउँगाउँमा शिविर सञ्चालन गरेको यो गाउँपालिकाको पहलमा ४४ वटा जनसत्ता लिखतले मान्यता पाए ।